I-SEO Yasendaweni: Iyini ingcaphuno? Isakhiwo se-Citation? | Martech Zone
ULwesithathu, May 20, 2020 NgoMsombuluko, Mashi 28, 2022 Douglas Karr
Ukusesha kwasendaweni kungukuphila kwanoma iyiphi inhlangano ekhonza isifunda sendawo. Akunandaba ukuthi i-franchise kazwelonke enezindawo kuwo wonke amadolobha ahlukene, usonkontileka wokufulela, noma indawo yokudlela yangakini… ukuseshwa kwebhizinisi online kukhombisa inhloso enhle yokuthi ukuthenga kuyeza ngokulandelayo.
Isikhathi eside, ukhiye wokuthola izinkomba esifundeni ububa namakhasi athuthukile akhuluma ngamadolobha athile, amakhodi eposi, izifunda, noma ezinye izimpawu zesifunda ezingakhomba ibhizinisi lakho njengelasendaweni. Ukhiye wokukleliswa esifundeni bekuwukuqinisekisa ukuthi izinkomba zebhizinisi zikufaka kuhlu ukuze abakhasi beGoogle bakwazi ukuqinisekisa isifunda sakho ngokunembile.
Njengoba ukusesha kwasendaweni kuguquka, i-Google yethule i-Google Bhizinisi Lami futhi lokho kwanika amandla amabhizinisi ukuthi akwazi ukulawula kangcono imiphumela yawo yokusesha ngokwendawo yosesho lwekhasi “map pack” Kuhlanganiswe nomsebenzi nokubuyekezwa okuhle, inkampani yakho ingakhuphukela phezulu kwabancintisana nabo ngokugcina ubukhona bendawo obusebenzayo.
Kepha ukuba khona kwesiqondisi, i-akhawunti ye-Google Bhizinisi Lami, nokuqoqa izibuyekezo akuzona kuphela okhiye bosesho lwasendaweni. IGoogle isibe nekhono lokwakha ama-algorithms angakhomba ukushiwo kwenkampani eku-inthanethi ngaphandle kwe-backlink. Lokhu kwaziwa njenge izingcaphuno.
Ukucaphuna kukhulunywa ngedijithali ngesici esiyingqayizivele sebhizinisi lakho online. Kungafaka igama lomkhiqizo elihlukile noma ulayini womkhiqizo, ikheli lendawo, noma inombolo yocingo. Akusiyo isixhumanisi.
Ngenkathi ababonisi abaningi bosesho bematasa bezama ukuthola izibuyekezo nama-backlinks, inkampani yakho yangakini nayo ingakhulisa ukubonakala kwayo kosesho lwasendaweni ngokusebenzisa izingcaphuno.
Yini iCitation Building?
Ukwakha izingcaphuno Isu lokuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho ukhulunywa ku-inthanethi ngamanye amawebhusayithi anezikhombo ezihambisanayo. Lapho izinjini zokusesha kaningi futhi muva nje zibona umbhalo ocashunwe ku-inthanethi owehlukile ebhizinisini lakho, kusho ukuthi ibhizinisi lakho lithembekile kakhulu futhi bazoqhubeka bakubeke ezingeni losesho oluqhutshwa endaweni ku-inthanethi.
ICitation Building ibaluleke kakhulu kunakuqala ngoba yakha ubukhona be-inthanethi bamawebhusayithi. Ezweni lapho uhhafu lwalo lonke usesho lwe-Google lunereferensi yendawo, leli isu elibucayi.
Ukusesha Ngezwi kanye Nokucaphuna
Ngokukhula kosesho lwezwi, ukuthola izingcaphuno ezingaguquguquki nezinembile kuya ngokuya kubaluleke kakhulu. Ukusesha ngezwi akukuniki ithuba lokuthola isivakashi ngaphandle uma ibhizinisi lakho liyimpendulo futhi nemininingwane oyinikeza izinjini inembile.
Abantu abangaphezu kuka-1 kwaba-5 basebenzisa ukusesha ngezwi kanti ama-48% wabasebenzisi bokusesha ngezwi bafune imininingwane yendawo yebhizinisi.
Uberall iyipulatifomu enika amandla ukuphathwa kwesikhathi sangempela kwedatha yendawo yesitolo kuwo wonke amapulatifomu okusesha, izinhlelo zemephu, neziteshi zemidiya eziqhuba ukuthengisa. I-Uberall inika amandla amabhizinisi ukuphatha ukubakhona kwebhizinisi labo online, idumela nokuxhumana kwamakhasimende ngesikhathi sangempela kupulatifomu eyodwa abayibiza ngokuthi yi ifu lokumaketha indawo.
Cela i-Uberall Demo
I-Uberall nayo yethule Uberall Okubalulekile, inguqulo yamahhala yesikhulumi sayo esenzelwe ukuxhasa amabhizinisi endawo okunakekelwa kwempilo, abathengisi nezindawo zokudlela phakathi nobhadane. Bangasebenzisa i-Uberall Essential ukuvuselela uhlu lwabo mahhala ku-Google, i-Apple, i-Facebook, i-Bing, i-Yelp nokuningi.
Bashicilele le infographic, Isakhiwo se-Citation, enikeza ukubuka konke kokubhaliwe, ukwakhiwa kwezingcaphuno, kanye nezinzuzo zesu.
Tags: google ibhizinisi lamiinfographicuhluinombolo yocingoyini ukucaphuna